०१ : १६
सम्पूर्ण श्रोतहरू बीबीसी नेपाली अनलाइन खबर रातोपाटी अन्नपूर्ण पोस्ट खबरहब लोकान्तर बाह्रखरी सेतोपाटी उज्यालो अनलाइन हिमालखबर इकागज न्युज 24 नेपाल समाचारपत्र मेरो संसार नेपाल लाईभ देश सञ्चार बिजमाण्डू कारोबार पहिलो पोस्ट आर्थिक अभियान नेपाली पैसा स्वास्थ्य खबरपत्रिका आइसिटी समाचार रिपोर्टर्स नेपाल राजधानी थाहा खबर इमेज खबर आजको अर्थ सरल पत्रिका नेपाल खबर रातोपाटी | अंग्रेजी नेपालीपत्र हाम्रा कुरा केन्द्रविन्दु फरक धार आर्थिक न्यूज टेकलेख हाम्रो खेलकुद काठमाडौं प्रेस नेपाल घटना खबरहब | अंग्रेजी सुत्र न्यूज पालिका खबर आकार पोस्ट हलोखबर रिपोर्टर्स नेपाल | अंग्रेजी शिलापत्र कलाकर्मी मेरो लाइफस्टाइल नेपालहोम्स न्यूजपोलार मिडिया एनपी युवा पोस्ट देखापढी नेपाल टेलिभिजन अर्थ संसार साझा पोष्ट महेन्द्रनगर पोष्ट काठमाण्डौपाटी मकालु खबर | अंग्रेजी नयाँ पत्रिका Neplays दैनिक अनलाइन क्यानडानेपाल The Kathmandu Post डिसी नेपाल लोकान्तर | अंग्रेजी टेकपाना खरीबोट emountaintv नेपाल वाच मकालु खबर टेकसाथी GadgetFrame नयाँ पेज नेपाल समय कान्तिपुर नेपाल न्यूज नेपाल प्रेस नेपालबहस सेतोपाटी | अंग्रेजी अनलाइन खबर | अंग्रेजी शुभयात्रा नेपाल पेज जन आस्था लोकपथ अर्थ-डबली
फराकिलो छाती र आकर्षक बडी बनाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसोभए विहान दैनिक गर्नुस् यी ४ एक्सरसाइज
काठमाडौँ । फराकिलो छाती र काँध बनाउने अधिकाशं पुरुषहरुको चाहना हुन्छ । त्यस्तै महिलाहरुमा सुन्दर ,लामो कपाल र स्लिम बडी बनाउने चाहना हुन्छ । त्यसरी नै राम्रो ब्यक्तित्वको लागी आकर्षक बडी ,फराकिलो छ...
medianp.com . २ बर्ष अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जाडोमा यी ३ रोग भएका ब्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् काउली , हुन्छ बेफाइदा
काठमाडौँ । जाडौ मौसमका काउलीको तरकारी खान धेरैले रुचाउँछन् । यसलाई मानिसहरुले तरकारी मात्र होइन् पराठा तथा पकौडा समेत बनाएका खाने गर्दछन् । काउलीको तरकारी खानु स्वास्थ्यको लागी पनि लाभदायक हुन्छ । ...
बच्चाले कति समयसम्म र कति दुरी टाढाबाट हेर्नुपर्छ टिभी ? जसले आँखामा असर नपरोस्
काठमाडौँ ।अधिकांश आमाबाबु बच्चाले टिभी धेरै हेरेर हैरान भएका हुन्छन् । आमाबाबुले हेर्न नदिदाँ पनि जिद्दी गरेर भएपनि हेर्ने गर्दछन् । अझ कोही बच्चाहरु टिभी नहेरिकन खाना पनि खादैनन् । तर टिभीको अगाडि...
दिपिका पादुकोणको फिल्म ‘छपाक’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ । दिपिका पादुकोणको फिल्म ‘छपाक’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा दिपिकालाई अन्य फिल्ममा भन्दा विलकुलै फरक अवतारमा देख्न सकिन्छ । उनी फिल्ममा एसिड आक्रमणमा परेकी पिडित युवती म...
सलमान खानको फिल्म ‘दबंग ३’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक , चुलबुल पाण्डेले देखाए एब्स
काठमाडौँ । सलमान खानको फिल्म ‘दबंग ३’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । यो पोस्टर अभिनेत्री सई मांजरेकरले आफ्नो इंस्टाग्राममा सेयर गरेकी छिन् । तस्विर सेयर गदै सईले क्याप्सनमा “फिल्म यस दशकको सबैभन...
‘बिग ब्रदर’को फस्ट लुक सार्वजनिक ,आईपियस अफिसरको भूमिकामा देखिदै अरबाज खान
काठमाडौँ । मलयालम सुपरस्टार मोहनलालको फिल्म ‘बिग ब्रदर’को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । यस पोस्टरमा हिन्दी सिनेमाको अभिनेता ,निर्देशक तथा निर्माता अरबाज खान पनि देखिएका छन् । मोहनलाले आफ्नो फिल्मको केह...
ब्लड शुगरको नियन्त्रण गर्न विहान दैनिक पिउनुस् नरिवल पानी र अम्बाको जुस
काठमाडौँ । डायबिटिज एक यस्तो रोग हो , जब प्यांक्रियाजले पर्याप्त इंन्सुलिनको उत्पादन गर्न सक्दैन् । जसको कारण शरिरमा ब्लड सुगर अनिंयत्रित हुन्छ । यसले ब्लड सुगरको मात्र अचानक बढउँछ । डायिबिटिजले मु...
कपिल शर्मा बने बाबा , पत्नी गिन्नीले दिइन छोरीलाई जन्म
काठमाडौँ । द कपिल शर्मा शोको होस्ट तथा कमेडियन कपिल शर्मा बाबा बनेका छन् । उनको पत्नी गिन्नी चरतथले छोरीको जन्म दिएकी छिन् । कपिलले ट्वीट गदै आफ्नो फ्यानहरुलाई यो खुसीको खबर जानकारी दिएका छन् । कप...
शरिरमा क्याल्सियमको कमी भएको कसरी थाहा पाउने ? देखिन्छन् यस्ता ५ लक्षणहरु
काठमाडौँ । हाम्रो शरिरमा नभई नहुने तत्वहरुमध्ये क्याल्सियम पनि एक हो । क्याल्सियमले दाँत र हड्डीलाई बलियो बनाउनुका साथै मतिष्कबाट प्राप्त हुने सन्देशलाई शरिरको कोषसम्म पुर्याउने काम गर्दछ । त्यति म...
‘झिँगेदाउ’ मा केकी अधिकारी देखिइन् यस्तो लुक्समा
काठमाडौँ । ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा बनिरहेको फिल्म ‘झिँगेदाउ’ मा केकी अधिकारीको लुक्स सार्वजनिक भएको छ । तस्विरमा केकीलाई निकै फरक लुक्समा देख्न सकिन्छ । तस्विरमा उनी सिउँदोमा सिन्दुर, हातमा ...
दिपिकाको फिल्म ‘छपाक’ को ट्रेलर भोलि रिलिज हुने ,दिपिकाले भिडियो सेयर गदै यस्तो भनिन्
काठमाडौँ । दिपिका पादुकोणको फिल्म ‘छपाक’ को पोस्टर सार्वजनिक भएपछि दर्शकहरुले फिल्मको ट्रेलर रिलिजको समय प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । यद्यपि अहिले फिल्मको ट्रेलरको प्रतिक्षाको घडी समाप्त भएको छ । किनभन...
मुटु स्वास्थ्य र ब्लड प्रेशरको नियन्त्रण गर्न खानुस् चुकन्दर , यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु
काठमाडौँ । चुकन्दर स्वास्थ्यको लागी एकदमै फाइदाजनक फल हो । यो हल्का रातो रगंको हुन्छ । चुकन्दरको रस जिम गर्ने मानिसहरुको लागी पनि राम्रो हुन्छ । यसले रक्तचापलाई कम गरी रक्त सञ्चार राम्ररी गराउँछ । ...
यी हुन् आफ्नै सम्पत्ति कति छ भनेर थाहा नपाउने प्रविधि जगतका अर्बपति
काठमाडौँ । यो संसारमा यस्ता अचम्मका अर्वपति ब्यक्तिहरु पनि रहेका छन् । जसलाई आफ्नो सम्पति कति छ भने थाहा छैन् । उनको नाम एलोन मस्क हो । उनी टेस्ला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनलाई प्रव...
धुम्रपान गर्नु पुरुषको तुलनामा महिलालाई धेरै खतरा , यस्ता छन् ८ बेफाइदाहरु
काठमाडौँ । पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरणसँगै चुरोट खाने युवायुवतीहरुको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । अझ भन्नुपर्दा पुरुषको तुलनामा महिलामा यो संख्या ह्रवातै बढेको छ । एक अध्ययनको अनुसार पनि महिलाहर...
पारस शाहले चढेको ‘हार्ले डेभिड्सन’ बाइकको मूल्य यति धेरै महँगो ? जुन नेपालको शोरुममा उपलब्ध छैन
काठमाडौँ । केही समय अगाडि पूर्वयुवराज पारस शाह र चर्चित युटुबर सोनिका रोकायाको सम्बन्धले सामाजिक सञ्जाल निकै ततायो । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुको एक टिकटक भिडियो निकै भाइरल भयो । भिडियोमा सोनिका पारसक...
आमिर खानको फेरी देखिए यस्तो लुकमा ,चिन्न निकै गाह्रो ! हेर्नुस् तस्विर
काठमाडौँ । बलिउडको अभिनेता आमिर खान आफ्नो फिल्मको लुकलाई लिएर अहिले निकै चर्चामा छन् । प्रत्येक फिल्ममा फरक भूमिका निभाउनको लागी आमिरले कुनै पनि कसूर बाँकी राखेका छैनन् । चाहेँ तौल बढाएर होस् या घट...
अनुष्का शर्मा देखिइन यस्तो बोल्ड अवतारमा ,हेर्नुस ( ५ तस्विर)
काठमाडौँ । अनुष्का शर्मा बलिउडको चर्चित अभिनेत्रीमध्ये एक हुन् । उनले आफ्नो करियरको सुरुवात मोडलिङबाट सुरु गरेकी थिइन् । उनले बलिउडमा अभिनयको सुरुवात सन् (२००८) फिल्म ‘रब ने बना दी जोडी’बाट सुरुवात...
चिसो मौसममा ओठ फुट्ने समस्या छ ? त्यसोभए अपनाउनुस् यी ५ घरेलु उपाय
काठमाडौँ । चिसो मौसम सुरु भएसँगै मानिसहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु देखिन थालेका छन् । जसमध्येको एक ओठ फुट्ने समस्या हो । यदि हाम्रो ओठ फुटेमा पोल्ने , बोल्न नहुने , खाना खान गाह्रो हु...
चार दिशामध्ये कुन दिशामा सिरानी लगाएर सुत्नु शुभ ,कुन दिशामा अशुभ ? (जान्नुस् )
काठमाडौँ । शास्त्रका अनुसार चार दिशामध्ये प्रत्येक दिशामा सिरान लगाएर सुत्दा फरक फरक फल प्राप्त हुन्छ । तर मानिसहरु आफ्नो घर र शरिरको अवस्था अनुसार फरक दिशामा सिरानी लगाएर सुत्ने गर्दछन् । यता वैज्...
बच्चा जन्मेको १ वर्षसम्म के खुवाउने ,के नखुवाउने ? (जान्नुस्)
काठमाडौँ । बच्चा जन्मेको एक वर्षसम्म बच्चालाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । किनभने यो समय बच्चाको शारिरिक र मानसिक विकास त्रीव हुने समय हो । जसले गर्दा यो समयमा बच्चालाई सन्तुलन मिलाएर आवश्यक पौष्टिक प...
काँचो लसुन भन्दा भुटेको लसुन स्वास्थ्यको लागी धेरै लाभदायक : यस्ता छन् ५ फाइदाहरु
काठमाडौँ । लसुन खानु स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक हुन्छ । यसमा भिटामिन बि , सि ,म्यागजिन ,कपर ,क्याल्सियम र मिनिरल्स जस्ता पोषक तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । तर विज्ञहरुको अनुसार काँचो लसुनभन्दा अझ भ...
कार्टुन क्रुको नयाँ भिडियो ‘नाइँ नाइँ हुन्न हुन्न’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ । चर्चित गायक सन्जिब पराजुली र गायिका सुजता उपाध्यायको स्वरमा नयाँ गीत ‘नाइँ नाइँ हुन्न हुन्न’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा मनस राजको शब्द र कम्पोज रहेको छ । गीतमा उदय राज पौडेलको सं...
केकी अधिकारीको नयाँ फिल्म ‘चालबाज’ को छायांकन सुरु
काठमाडौँ । कैलाश राईको निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ फिल्म ‘चालबाज’ को औपचारिक रुपमा छायांकन सुरु भएको छ । यो फिल्मको शनिबार दार्जिलिङबाट छायाकंन सुरु गरिएको हो । फिल्ममा अरुण तामाङको लगानी रहेको छ ।...
नायिका ऋचा शर्मा र दिपेशको विवाह : ऋचाले तस्विर सेयर गदै यस्तो भनिन् (तस्विर)
काठमाडौँ । चर्चित नायिका ऋचा शर्मा दिपेश विक्रम राणासँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । शनिबार उनीहरुले लामो समयको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् । उनीहरुको केही समयअगाडि पोखरामा ब्याचलर प...
“दे दे प्यार दे” पछि अजय देवगन र रकुल प्रीत फेरी सँगै देखिदै , कमेडी फिल्ममा सिद्धार्थ मल्होत्रा पनि हुने
काठमाडौँ । बलिउडकी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिहंको २ फिल्म २०१९ मा हिट भयो । रकुल ,अजय र तब्बू स्टार फिल्म “दे दे प्यार दे” ले बक्सअफिसमा १०० करोडको ब्यापार गरेको थियो । त्यही मरजावांमा रकुलको सिद्धार्...
‘प्रेमगीत ३’ मा अनुभव र योगिशाको क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक
काठमाडौँ । यस वर्षको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ को बालकलाकारको क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा बाल कलाकार अनुभव रेग्मी र योगिता खत्री निकै फरक अवतारमा देखिएका छन् । पो...
चलचित्र ‘सँगसँगै’ को आज भद्रकाली मन्दिरमा शुभसाइत
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र ‘सँगसँगै’ को शुभसाइत गरिएको छ । आज काठमाण्डौको भद्रकाली मन्दिरमा चलचित्रको शुभसाइत गरिएको हो । शुभसाइतमा निर्माण टिम र कलाकारको साथमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट...
‘माया पिरिम’ को नयाँ गीत ‘तिमीलाई पाउदा’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ । आज शुक्रबारबाट देशभर प्रर्दशन भएको फिल्म ‘माया पिरिम’ को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘तिमीलाई पाउदा’ बोलको गीतमा कोशिश छेत्रीको स्वर ,शब्द र संगीत रहेको छ । गीतमा उदीय राज पौडेलको संगीत ...
इदमा लक्ष्मी बम्ब र राधेको भिडन्त : सलमान खानसँगको भिडन्तबारे अक्षयले बताए यस्तो
काठमाडौँ । आगामी वर्षको इदमा सलमान खान र अक्षय कुमारको भिडन्त हुने भएको छ । सलमानको “राधे ,मोस्ट वान्टेड भाई” र अक्षयको “लक्ष्मी बाँम्ब”को बक्सअफिसमा टक्कर हुने पक्का भएको हो । यस टक्करलाई लिएर दर्...
के तपाई असल जीवनसाथीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी ४ चिज अवश्य चेक गर्नुस्
काठमाडौँ । विवाह एक ब्यक्तिको महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि ब्यक्तिले विवाहको फैसला गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नुपर्छ । यदि तपाईको असल ब्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँसिएमा भविष्य एकदमै रोमान्टिक र सुखद हुन्छ । स...
सखरखण्ड खानुका यस्ता छन् ५ फाइदाहरु , आलुको तुलनामा धेरै पौष्टिक सखरखण्ड
काठमाडौँ । सखरखण्ड जाडोको मौसममा पाइने एक किसिमको फल हो । हेर्दा आलु जस्तो लामो लामो देखिने सखरखण्डको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ । यसमा भिटामिन ए ,सि , क्यालोरी , प्रोटिन ,फाइबर ,मिनिरल्स र एन्टीअक्सिड...
नायक पुष्प खड्काको लागी ‘गाइदिन्छु गीत’ भन्दै आइन् रेश्मा (भिडियो)
काठमाडौँ । गायिका बनिका प्रधानको स्वरमा नयाँ गित ‘गाइदिन्छु गीत’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा बिनिता उप्रेती खनालको शब्द र किरण कडेँलको कम्पोज र एरेन्ज रहेको छ । यो गीतको भिडियोलाई बुढा सुब्ब...
फ्राइडे रिलिज: आजबाट हलमा ‘माछा माछा’ र ‘माया पिरिम’ को भिडन्त
काठमाडौँ । आज शुक्रबारबाट हलमा दुई फरक जनराको नेपाली फिल्म रिलिज भएको छ । केही समयदेखि रिलिज भएको फिल्मले हलमा दर्शक तान्न नसिरहेको बेला यी दुई फिल्मले दर्शक तान्ने आशा गरिएको छ । हलमा टेक पौरखी रा...
आँखाको दृष्टि बढाउनको लागी खानुस् यी खानेकुरा ,आँखा सधै रहनेछ स्वास्थ्य
काठमाडौँ । आजकाल हामी सबै स्वास्थ्यलाई लिएर निकै चिन्तित हुन्छौँ । त्यसका लागी मानिसहरुले खानकुरामा विशेष ध्यान दिने गर्दछन् । तर केही मानिसहरु स्वास्थ्यको कारणले आँखामा खासै ध्यान दिदैनन् । तिनीहर...
काठमाडौँ । मन्दिरमा भगवानलाई भक्तजनहरुले धेरै फूल चढाउने गर्दछन् । त्यसपछि नरिवल दाना र यसलाई फुटाएर पनि चढाइन्छ । हिन्दू धर्मका अनुसार नरिवललाई कुनै शुभ कार्यको सुरुवात गर्दा चढाइने गरिन्छ । जस्तै...
चलचित्र ‘दि कर्मा’को टिजर सार्वजनिक , करण र नीता एक्सन अवतारमा (भिडियो)
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र ‘दि कर्मा’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक टिजरमा चलचित्रको मुख्य कलाकार करण वर्मा र नीता ढुंगानालाई एक्सन अवतारमा देख्न सकिन्छ । त्यस्तै ,अर्की नायिका परमिता आरएल राण...
आँखामा डार्क सर्कल छ ? त्यसोभए यी ४ घरेलु उपायबाट हटाउनुस ! (विधीसहित)
काठमाडौँ । अधिकांश मानिसहरुमा डार्क सर्कलको समस्या हुन्छ । यसको मुख्य कारण मानसिक तनाव र अनिन्द्रा हो । दिनभरको धेरै कामको प्रेसर र तनावको कारण रातभरि राम्ररी सुन्न सकिदैन् । यसरी निन्द्रा नपुगेपछि...
बलिउडका यी ५ कलाकार , जो रक्सि र चुरोटको लतबाट निकै टाढा छन् !(तस्विर)
काठमाडौँ । अहिलेको युवायुवतीको तथ्यलाई हेर्ने हो भने धुम्रपान र मद्यपान गर्नेको संख्या निकै बढेको छ । पछिल्लो समय धुम्रपान र मद्यपान लतको रुपमा भन्दा पनि फेसनको रुपमा बढी चलेको छ । यो चिज स्वास्थ्य...
अचम्मको जागिर : एक कम्पनीले सबैभन्दा धेरै सुत्ने मानिसलाई डेढ लाख तलब दिने
काठमाडौँ । सबैलाई थाहा छ , विश्वकै जुनसुकै देशमा पनि काम गरेमात्र तलब पाइन्छ । जुन क्षमता र स्तर अनुहार गर्ने कामहरु चाहि फरक फरक हुन्छ । तर विश्वकै जुनसुकै कुनामा पनि सुते वा अल्छी गरेमा भोकै हिड्...
शरिरमा रगतको कमी छ ? आजबाटै खान सुरु गर्नुस् यी ६ खानेकुरा
काठमाडौँ । यदि तपाई एनिमियाबाट पिडित हुनुहुन्छ । यसको मतलब हो ,शरिरमा आइरनको कमी छ । यस्तो त्यसबेला हुन्छ ,जब रगतमा हेमोग्लोबिनको स्तर सामान्यभन्दा धेरै कम हुन्छ । त्यसैले हेमाग्लोबिनमा आइरनको मात्...
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण
onlinekhabar.com . ६ घण्टा अघि
प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको भेटमा के के कुरा गरेका थिए
reportersnepal.com . ५ घण्टा अघि
पुनः मतगणनामा विजयी वडाध्यक्ष भन्छन्– धाँधली गर्नेलाई गतिलो जवाफ मिल्यो
एमालेमा १० बुँदे : ओलीको बाध्यता र रावलको राजीनामा
himalkhabar.com . ६ घण्टा अघि
रातोपाटी ब्रिफिङ : प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको ‘फुलकोर्ट’ बैठक न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्ने, प्रचण्ड र माधवलाई ओलीको चुनौती
प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारसम्मलाई बोधार्थ गर्दै सीके राउतद्वारा आन्दोलनको घोषणा
प्रधानन्यायाधीशको स्पष्टीकरण : प्रचण्डलाई भेटेको हो, बार्गेनिङ गरेको छैन
भारतसँगको सीमा विवादबीच चीनमा नयाँ ‘ल्याण्ड प्रोटेक्सन ल’ पारित
संसारभरी फैलिएको छ रजनीकान्तको सम्पत्ति, कुनै राजमहलभन्दा कम छैन चेन्नईमा भएको यो बंगला